Muuse Biixi iyo Orodyahanka Mo Farah oo baratamaya
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa caasimada dalka Itoobiya ee Addisababa kula kulmay Orodyahanka caanka ah ee Maxamed Faarax oo u dhashay Somaliland, una Orda Dalka Britain, kaasoo madaxweynuhu la qaatay kulan intii uu addis ababa ku sugnaa.
Mo Farax oo madaxweynaha kulankiisa, kaddib Warbaahinta Dawladda la hadlay ayaa ku amaanay madaxweynaha sida uu u danaynayo dhiiri-gelinta Ciyaaraha kala duwan, waxaanu tilmaamay inuu yahay madaxweyne ay ka muuqato dhisnaan iyo howl-karnimo xirfaddi ku dheehan tahay.
Orodyahankan haysta Dhalashada dalka Ingiriiska, balse asal ahaan ka soo jeeda Somaliland ayaa sheegay inuu Dhalinyarada Somaliland ka caawin doono qalabka iyo aqoonta Ciyaaraha, isagoo intaa ku daray in dhankoodana looga baahan yahay dedaal.
“maanta waddankeenu meel fiican ayuu marayaa, waa inay dhalinyaradu ku dedaallaan sidii ay u horumarin lahaayeen Ciyaaraha, aniguna waa inaan ka caawino wixii qalab iyo tababaro ah”ayuu yidhi Mo Faarax oo la hadlay Telefishanka Qaranka Somaliland.
Wuxuu intaa ku daray “Madaxweynuhu waa qof aad u dhisan oo aan u malaynayo inuu maalin walba Ciyaaro Orodka, aadbaan uga helay, sharaf ayayna ii tahay inaan la kulmo”.
Madaxweyne Muuse Biixi iyo Mo Faarax ayaa qadar Orod gucle ah ku sameeyey barxad bannaan oo ku taalla Hudheelka ay kulmeen, taasoo muuqaal laga duubay lagu baahiyey Mareegaha Wararka, soona jiidatay indhaha Bulshada.
Previous: Waan hayaa dawadii. W/Q: Xamse Cumar Kujoog
Next: Nin saacaddo gudahood ku taajiray